शुक्रवार, माघ ९, २०७७ ०९:१९:३६ युनिकोड
कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीहरू नै अन्यौलमा
सडकमा सत्तोसराप गर्नेका बीचमा मैले कसरी काम गरें हुँला ? : प्रधानमन्त्री
७ जनाले लिए बन्ध्याकरण सेवा
धौवादीबाट फलाम उत्पादनको काम शुरु हुदा प्रत्यक्ष लाभ नवलपुरका ब्यवसायीलाई - तिलक महत
भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने– ‘कोभिड विरुद्धको लडाइँमा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न भारत सधैँ प्रतिबद्ध छु '
सवारी चालकसँग घुस लिने तीन प्रहरी निलम्बनमा
पाँच आईसीयु,पचास शैया सहित सम्पूर्ण अत्याधुनिक सेवा विस्तार
शुक्रवार, श्रावण ९, २०७७ सालिकराम कोइराला
नवलपुर : कावासोती नगरपालिका १६ डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरको क्षमता बिस्तारगरि नमूना अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
अस्पतालले एक करोड उनान्सत्तरी लाखमा पाँच आईसीयुका उपकरण खरिद गरि जडान कार्य शुरू गरेको छ ।
पन्ध्र शैया रहेको अस्पताल यसै बर्षदेखि पचास शैया बिस्तार गरेर सम्पूर्ण अत्याधुनिक सेवा दिनेगरि आफुहरू अहोरात्र खटेको अस्पतालका अध्यक्ष डा. गोपाल खनालले जानकारी गराए । अस्पतालमा पूर्व संचालित ओपिडी सेवाका अतिरिक्त जनरल सर्जरी, गाईनो, सर्पदंश र आँखा उपचार पनि तुरुन्तै शुरूवात गरिने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्मित अत्याधुनिक तीन तले बिल्डिङ यसै बर्ष सम्पन्न हुने भवन निर्माण समितिका संयोजक डासुराज पोखरेलले बताए । अस्पतालमा शवगृह,आँखा उपचार कक्ष र फोहरमैला ब्यबस्थापन गृहको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक बर्षमा बिल्डिङलाई थप तीन करोड र स्टाफ क्वाटरलाई दुई करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको संयोजक पोखरेलले बताए ।
अस्पतालमा आईसीयु सेवा नभएका कारण सर्पदंशका बिरामी समेत भरतपुर रेफर गर्नुपरेको थियो । शव गृह र मर्चरी च्याम्बर नभएका कारण शव पोष्टमार्टम गर्न पनि अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल शव गृहका निम्ति दुईवटा मर्चरी च्याम्बर खरिद गरि संचालनको तयारी गरिएको छ भने तुरुन्तै सर्पदंशका बिरामीको उपचार शुरू गरिने भएको छ । नवलपुरवासीलाई जिल्ला भित्रै सप्पूर्ण सेवा दिने गरि दिर्घकालिन लक्ष्यका साथ अस्पताल ब्यबस्थापन समितिले कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीका अनुसार दरबन्दी अनुसार प्रयाप्त डाक्टर नभएका कारण करार सेवाबाट आवश्यक डाक्टरहरू नियुक्त गरिएको छ । दरबन्दी अनुसारको डाक्टर, पारामेडिक्स, स्टाफ नर्स लगाएत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । हाल अस्पतालमा दैनिक ६० देखि सय जनाले स्वास्य सेवा लिंदै आएका छन् ।
पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको डण्डा बजार नजिकै शान्त ठाउँ र हरियालीमा रहेको नवलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल परिसरमा आकर्षक बगैँचा समेत निर्माण गरिएको छ । अस्पतालको पश्चिम पट्टी आरोग्यश्वर महोवको मन्दिर निर्माण गरिएको छ । उक्त मन्दिरको गतवर्ष मुक्तिनाथ पिठाधिस स्वामी कमलनयनाचार्यले शिलान्यास गरेका थिए । हाल अस्पतालको सेवा बिस्तारसँगै स्थानीयवासी गुणस्तरीय सेवा लिन लालायित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, श्रावण ९, २०७७, ११:२७:००
पुस्तकालयका लागि नवलपुरका साहित्यिक कृति हस्तान्तरण
कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीहरू नै अन्यौलमा शुक्रवार, माघ ९, २०७७
जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बुधवार, माघ ७, २०७७
नेपाल–इजरायलबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा बिहीबार हस्ताक्षर हुने बुधवार, माघ ७, २०७७